Ukukhiqizwa Enterprise "Engineering" yasungulwa ngo-1992, umsunguli wayo - Ihlangano yokuNgeza imishini ekhethekile. PP "inqubo" - inkampani umjikelezo ogcwele, wahlanganyela ukuthuthukiswa kanye womshini imishini ekhethekile futhi izimoto zempi. Yonke imikhiqizo bahlolelwa ichashazi ukumelana maphakathi isivivinyo GU NPO "Imishini ekhethekile nokuxhumana" futhi Ministry Interior wathola izitifiketi ezikhishwe umzimba isitifiketi kusho izivikelo zomzimba kanye nemishini ekhethekile, ukuvunyelwa uhlobo imoto ka-Russian State Standard.
Amakhasimende ethu zihlanganisa Ministry of Finance (GOKHRAN), Ministry of Communications (Special Ukuxhumana Russia), Central Bank of the Russian Federation, Russian Association of iqoqo CBR Isevisi yokuhambisa yeRussia, Ministry of Atomic Energy, Ministry of Interior, eMnyango Wezokuvikela, Rao "Gazprom" futhi "Inkakhran", amabhange kazwelonke Republic of Belarus, eziningi CIS amazwe nezinhlangano engaphezu kwamakhulu amabili commercial eRussia.
Umqulu zokukhiqiza yethu - 40-50 izimoto ezikhethekile ezinhlobo ezehlukene ngenyanga. Ukuze kukhiqizwe izimoto ekhethekile esetshenziswa chassis kokubili production ezifuywayo (KAMAZ, "Ural", Zil, Gaz, UAZ, Vaz) kanye amazwe (Mercedes, Volkswagen, General Motors Ford, Volvo, Peugeot, Land Rover nabanye). Co nke ngu bezimoto eziyisisekelo ngemvume sivumelwano yezifiso ukusebenziseka chassis eziyisisekelo noma yezifiso avumele ukusetshenziswa kwemikhiqizo uthenge. Le nkampani ine Izivumelwano OAO "Gaz ', General Motors Ford, Volkswagen," Volvo Vostok ", bavumele abanye ngcono ukubhuka ukukhiqizwa yabo imoto ngenkathi sigcina kugada ku imoto base.
Kusukela ngo-1995, i-PP "Ubuchwepheshe" ukhiqiza izimoto armored ukuze Volkswagen chassis, futhi kusukela ngo-2006 futhi uhlanganyela amaphrojekthi ngokuhlanganyela ne "Volkswagen Group Rus". Ngo iphrojekthi ezikanye "Auto Hansa", umthengisi olusemthethweni Volkswagen eRussia, inkampani uye wakwazi ukubhuka VW-Crafter 50 imoto.
Kanye "URARTU Motors" yakhiwe futhi baletha ukumaketha armored nemoto brand "Knight-Junker" esekelwe VW Caddy. Ngo inombolo yohlobo Kufanele kuqashelwe futhi izimoto armored for VIP-abantu phezu chassis Chevrolet Ta hoe, le Cadillac le Escalade.
Imigomo ukulethwa umkhiqizo kuncike ukutholakala izimoto eziyisisekelo futhi kungaba lisukela ezinsukwini ezimbalwa kuze kube izinyanga eziyisithupha. Ngqo encwadini kuthatha elilodwa kuya ezinyangeni ezimbili (kuncike ukumisa).
Ngo womshini izimoto ezikhethekile esekelwe chassis amazwe base imoto yesiqinisekiso iyagcinwa ngokugcwele, isekelwa yi wabenza ogunyaziwe abakhiqizi. Isiqinisekiso nasenkonzweni izimoto ezikhethekile, senziwa chassis of production ezifuywayo, ukufaka loluhlelo ngokuphelele esiteshini inkonzo inkampani yakho. Ngesikhathi ukulungisa kwaleyondawo emva iklayenti imoto armored, singahlinzeka yona ukuqasha enye imoto armored. Nakabuka isipiliyoni international, Sethule ifomu elisha kwamakhasimende - Imenenja siqu. Isebenza yiklayenti kusukela ukuze ukulethwa izimoto armored operation, aphendvule yonke imibuzo, ubika ukuqaliswa kwe-oda.
PP "inqubo" has izakhiwo ukukhiqizwa ukwenziwa imikhiqizo ye-serial eMoscow nesifunda eMoscow, ifakwe imishini ye-plasma ahlabayo, manual semi-automatic Welding zempi lezinsimbi i igesi imvelo inert, ezikhethekile ngoba avtoslesarnyh msebenzi. Sisebenzisa kuphela izinto futhi izingxenye abakhiqizi owaziwa, kanye nokulawula yokufaka yonke imikhiqizo engenayo. Ukusebenzisa nakho emhlabeni, abaklami onjiniyela ibhizinisi futhi ukwethula siqu ukubhuka icebo labo yokuqala, kulolo vivinyo futhi abathole amaphuzu aphezulu izinga siyiqiniso izivikelo zomzimba. PP "Ubuchwepheshe" ukhiqiza izimoto armored ngoba isikimu yasekuqaleni Imininingwane ukubhuka capsule kufihlwe, ukuhlinzeka Makimalno amandla nokuqikelela ukuthi abagibeli umzimba.
abasebenzi Scientific lenkampani ngokubambisana State "NGO" Imishini ekhethekile nokuxhumana "Ministry Interior, Ministry NII-21 wezokuVikela we Russian Federation State Scientific Centre of Russian Federal inarha ebumbeneko Enterprise" nathi "kanye nezinye izinhlangano zezesayensi ucwaningo endaweni okwandayo izinto inhlamvu netakhiwo, nokuthuthukisa izixazululo ezintsha lobuchwepheshe e izivikelo zomzimba.
imikhiqizo yayo PP "Technique" kuyinto emibukisweni ezikhethekile
futhi ezidayiswa, kuba postoyannymuchastnikom izingqungquthela, izinkundla bheka
Minar ezindabeni ngezihloko ezihlukene ukuthuthukiswa kanye ukukhiqizwa imishini ekhethekile, kuhlanganise izingqungquthela olwenziwa yi-Institute of Banking
Association of Banks Russian.
Mercedes GLA: imvume, ukubuyekezwa, intengo kanye Ukucaciswa (izithombe)
Isitofu (VAZ-2114) ayisebenzi - yini okumele ngiyenze?
'Charozetta' izindlela. Ukubuyekeza, izincazelo, isicelo
Indlela yokulungisa amashiya ezimbi?
Hungary Imali: Umlando kanye Isimo yamanje
Indlela yokwenza ibhola iphepha ngezandla zakho? Iphepha amabhola ku New Year
Boilers TT-evuthayo eside
Uchungechunge mayelana abameli, abameli kanye abaphenyi. amabhayisikobho ayizintandokazi
Ngo zigcwele civil ephakama iminyaka engu-18. Article yomthetho, izici kanye nezidingo
Indlela ukususa umculo kusuka iPod yakho ngesandla
Kuyini yenhliziyo Umthambo isifo
Relief namaminerali Mongolia